UNWTO dia manasongadina ny fizahan-tany momba ny Gastronomy any Japon
Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » UNWTO dia manasongadina ny fizahan-tany momba ny Gastronomy any Japon
Enga anie 27, 2019
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO), ny Japan Travel and Tourism Association (JTTA) ary Gurunavi dia namoaka ny Tatitry ny UNWTO vaovao momba ny fizahan-tany Gastronomy: The Case of Japan.
Amin'izao fotoana izao, ny foto-kevitra momba ny fizahan-tany momba ny gastrolojia any Japon dia vaovao ihany. Na izany aza, araka ny asehon'ity tatitra ity, ny fizahan-tany momba ny gastrolojia any Japon dia nankafy fitomboana matanjaka tato anatin'ny taona vitsivitsy, manome tombony ara-toekarena ary miasa ho fitaovana fampandrosoana sy fampidirana sosialy.
"Rehefa mihamaro ny mpitsangatsangana mitady traikefa tsy manam-paharoa momba ny gastrie eto an-toerana, ny fampiroboroboana ny fizahan-tany momba ny gastronomie dia nifindra nankany amin'ny toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana fizahan-tany sy ny mety ho anjara birikiny amin'ny tanjona fampandrosoana maharitra", hoy i Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO.
"Amin'ny alàlan'ny ohatra mahomby isan-karazany amin'ny fizahan-tany momba ny gastrolojia any Japon, ity tatitra ity dia mampiseho ny fomba nanatanterahan'ilay firenena ny fizahan-tany ny fizahan-tany gastronomy ho fitaovana ho an'ny fampandrosoana, fampidirana ary fampidirana isam-paritra."
Ny fikarohana natao ho an'ity tatitra ity dia nahitana fa ny 38% amin'ireo prefektioran'i Japon dia misy na mikasa ny hampiditra ny fizahan-tany momba ny gastrolojia amin'ny drafitra ho avy, raha 42% kosa kosa ny vondrom-piarahamonina dia nitatitra fa efa manana ohatra momba ny hetsika fizahantany mifandraika amin'ny gastronomie. Ny tatitra dia manasongadina ihany koa ny haavon'ny fiarahan'ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahan-tany momba ny gastrie.